トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Imeyili kusuka pachinko emakhazeni ewusizo ethebuleni ukukhetha
Ngo-pachinko eshintsha, ke ithumele ibhizinisi e-mail kosuku njengoba imisebenzi yokusebenza. E-mail ingxenye kakhulu, ekuseni ovuliwe ngaphambi kanye kwasemini, futhi uye waba eziningi pachinko emakhazeni ukuthumela kusihlwa nobusuku kane. Phakathi komcimbi omkhulu, kungase ukwandisa ngaphezulu. Esikhathini mail zilethwe lutho ama-imeyili usuku olunjalo, ukukhuluma yemeyili ewusizo okuhle, iyona mail ubusuku ngaphambi nje ukuvala evulekile ngaphambi imeyli ekuseni.
Okokuqala, imeyili ekuseni, kodwa ngifuna ugcine ebuka uvalwe-imeyli kakhulu. imodeli Izinkundla futhi umcimbi agcinwe isikhathi sosuku noma, indlela ukuvulwa Xintai, ngoba lisekelwe imeyili kakhulu ekuseni, uqhubeka kangcono ukubukela ngokuqinile.
Ngaphezu kwalokho, imodeli ukuthi udlulisele ngombala futhi ngokugqamile izinhlamvu, akungabazeki ucabanga ukuthi imodeli ubeke amandla ngalolo suku. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi, uma izinsuku ezimbalwa imodeli umcimbi kwaba okufanayo, kule titular imodeli umcimbi, kukhona uma umshini yokutakula.
eposini nsuku zonke ekuseni, ungabona futhi ngokusebenzisa enjalo Gase umcimbi onobuhle. Futhi, lokho kube lula ukuze uthole okuningi ku-imeyili, it is a esitolo nogqozi. Ngisho kwezamabhizinisi evamile, noma ube umhlobiso engavamile emhlabeni igama imodeli, esimweni lapho umbala ngemuva ngesikhathi umcimbi noma zishintshile ukuze ezimnyama, ukuthi udaba ngomfutho kwenzeka ngosuku, kukhona amacala amaningi isikhalazo I.
ekuseni imeyili njengo sasemakhazeni pachinko, ngoba ibhizinisi kusho ukuheha abathengi, ingxenye esiwathandayo kunamanye ingxenye, kufanele ivelele. Ngaphezu kwalokho, sicela ubheke Phawula futhi amazwi.
Ngokwesibonelo, endabeni kuhloswe ibhola lokuhlukanisa ngilibhubhise esifundeni engcono, uma ungakwazi kukhona ithemba namaqiniso, isikhalazo ngendlela engafanele, njengaleso esashiwo inkokhelo eziqine futhi ukuqhuma wenkokhelo, njll, wena big time out okungukuthi, kusukela kukhona izimo eziningi egijima okuhloswe ngazo izenzakalo, ingabe nokunakwa ukusetshenziswa kwaleli gama kuyadingeka.
Ngokulandelayo, Ngifuna ukuhamba-imeyili yokuqinisekisa iyona mail ubusuku ilethwa avaliwe nje ngaphambili. I
mail ubusuku , Njengoba eye efakwe ohlwini kwelanga ibhola layo amazinga kanye ngosuku olulandelayo ulwazi lomcimbi, kuyasiza ukucabanga zempi uhlangothi ngosuku olulandelayo. Nokho wenkokhelo simo, wenkokhelo ngoba kungenzeka ukuthi othumele Te plus kancane, ngicabanga ukuthi kuhle ukuba liyobamba oda ukubhekisela cha kholwa lonke. Nokho,
, ukuthi ukuza ukubeka igama imodeli yigama imodeli wayengubani ngempela aphume, kungenxa yokuthi cishe, bangase banikeze phuzu. Ngaphezu kwalokho, imeyili evamile okungajwayelekile ngaphandle kwesikhatsi, ngoba kukhona icala lapho kukhona ulwazi ekhethekile, sicela uqiniseke ukuhlola.
ikakhulukazi kanje, uyeza Imininingwane ekhethekile uthunyelwa, kubonakala sengathi abaningi kusihlwa wangaphambilini kusuka ntambama. Kusihlwa, ngoba isikhathi ukusebenza ukhuphuka, kuyoba ngokwemvelo usithumela ibuke ke, labo ngaphawula yasheshe eyatholakala.
ukuze baphume uhlobo wamakhaza pachinko is in the imeyili, funda ezitolo umkhuba, yini engasisiza noma ulwazi, bese uzama ukuhlaziya kwakho usithumela kuba nenjongo.